Uwe Schmidt: Uwe Nwanyị Na-acha Ọcha
Iri asatọ HOODIE
Unicorn 3 OMmụ nwanyị HOODIE
Multi Yarn sweta Top
Ọdịda Pullover Hoodie Unisex
Obi ụtọ Fall Y'all Cropped Hoodie
Brielle mgbịrịgba aka uwe idu efe n'elu
Bandara Sleeve Rib Band Open Sweater Cardigan W / akpa
Long uwe W / strappy zuru ezu Now Neck Rib sweta Top
Ogologo aka uwe V-neck Button Down sweta Cardigan
Womens Loose Fit Turtle Olu Stripe Sweaters
Womens kpochapụwo Turtle Olu swita
Agba ntụ Zeus
Geneva Turtleneck ajị anụ sweta
V Olu 3/4 uwe aka na-agbaji Hi-lo sweta
Paxe Green sweta
Rosetta Pink Sweat
Long Sleeve Round Neck Mkpụrụ Sweater
Ogologo ogologo uwe na-eji swit
Urban Diction Lake Blue Lace-Panel Lace-Up Front Sweater - Womenmụ nwanyị
Ịgachi price $ 54.98 Zọpụta $ -54.98
Hoolọ ahịa Hoodie dị mma nke ọtụtụ narị ndị na-ese ihe dị elu ma kọwaa onye ị bụ.
Ngwakọta nke owu / Poly. Super-ekpo ọkụ na mma ajị anụ lining na kemeghi hundu na banded cuffs na-na okpomọkụ.
Zuru okè Cut:
Afọ nke ahụmịhe na nyocha mere n'ime nka zuru oke. Lelee eserese anyị iji hụ ka nke a si daba na ndị mmadụ n'ezie!
Ikike Zuru Okè:
Yiri uwe kachasị amasị gị na Hoodie nke na-adịchaghị oke ma ọ bụ arọ.
Emere nke ọma:
Mere na a mma, enyi na enyi, ngosi-ụgwọ ọrụ factory na Kechie na Fair Labour gbaara.
Ịgachi price $ 80.44 Zọpụta $ -80.44
Ọ bụ uwe mwụda kpuchiri ekpuchi nke ihe ọkụkụ dị mkpụmkpụ ka ọ bụrụ nke na-adịghị mma. Egwuregwu egwuregwu na nke nwanyị na-adaba nke ọma na nhazi ọ bụla ma na-arụ ọrụ nke ọma n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri.
Ịgachi price $ 27.48 Zọpụta $ -27.48
Otu n'ime ụdị ya, pụrụ iche edepụtara edepụtara zuru ezu dabara adaba n'úkwù hoodie nke i kere. Nkecha, ekpo ọkụ ma dịkwa mma - agbanyeghị oge ị na-asa ya, ọ gaghị ada mbà ma ọ bụ tọhapụ ya. Mepụta ihe niile edepụtara na galaxy, wii wii, emoji, nebula - họrọ ọkacha mmasị gị!
anyị na-ekwe nkwa ogo kachasị elu nke ngwaahịa niile azụrụ. Ọ bụrụ na usoro gị abụghị ihe ị tụrụ anya ya, nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị ọrụ ndị ahịa anyị. Anyị ga-eme ike anyị niile iji mee ka afọ ju gị.
Oge mbupu echere si na 3-8 ụbọchị ọrụ.
Hoodies E Bipụtara / Ahaziri / Ezubere Hoodies
Ndị inyom / Nwoke
Ọcha na-acha anụnụ anụnụ
Ịgachi price $ 168.90 Zọpụta $ -168.90
Model Elu bụ 5'-8 "
Modeldị Nlele bụ 30-24-35
Model bụ yi size Obere
Ịgachi price $ 47.50 Zọpụta $ -47.50
Na a obere n'ihu obere akpa na drawstrings na a kenha agba, a comfy Unisex Hoodie bụ a n'aka ìgwè mmadụ-ọkacha mmasị. Ọ dị nro, mara mma, ma zuru oke maka mgbede na mgbede udu mmiri.
50% na-emechi owu, 50% polyester
Ikike ákwà: 8.0 oz / yd² (271.25 g / m²)
Ugboro abụọ nwere okpukpu abụọ na nkwekọ dakọtara
Nkeji abuo-tụgharịa iji zere crease ala n'etiti
Ugbo ala nke ikuku na-agba gburugburu nwere mmetụta dị nro ma belata mpịakọta
1x1 egwuregwu na-agba mbọ na eriri n'úkwù na spandex
A na-ejikarị eriri aka ya agịga okpukpu abụọ, ubu, aka aka, na aka
Aka akpa n'akpa uwe
Girlsmụ agbọghọ, biko nye iwu maka etu ị kwesiri maka ịgbatị onwe ya, ma ọ bụ nke pere mpe maka ọdịdị ochie.
Ysmụ okorobịa, nye iwu nha ọ bụla.
Ịgachi price $ 97.50 Zọpụta $ -97.50
Nkasi obi na ụdị ịkpụgharị n'otu - nke ahụ bụ ụzọ kachasị mfe iji kọwaa hoodie na-aga n'ihu. Ọ na-eje ozi dị ka nnukwu nkwupụta mpempe akwụkwọ na akwa uwe ọ bụla, yana ya na-adịcha mma ma na-adọta eriri ahụ ga-abụ ezigbo ọkacha mmasị.
52% airlume combed na mgbanaka-yiri ogho, 48% poli ajị anụ
Ikike ákwà: 6.5 oz / yd² (220.39 g / m²)
Kpocha aru na ahihia ndu
Ihe nkedo e sijiri ya
A na-enweta ngwaahịa oghere na Nicaragua, Mexico, ma ọ bụ US
Model bụ yi a size M. Ọ bụ 5.8 ụkwụ (178 cm) ogologo, obi gbaa gburugburu 34.6 "(88 cm), n'úkwù gbaa 27.1" (69 cm) na hip gbaa gburugburu 37.7 "(96 cm).
Ịgachi price $ 75.00 Zọpụta $ -75.00
Oyi a mara mma buru ibu zuru oke maka ehihie na abalị. Na mgbakwunye, ụdị 'ọhia' a nwere ike ịbụ onye na-egbutu ihe ọ bụla?
Ejiri ajị anụ
Ìhè Heather Green
Ịgachi price $ 35.00 Zọpụta $ -35.00
100% agba acrylic
Uwe aka mgbịrịgba
Keyhole azụ zuru ezu
Cozy Casual ika
Ịgachi price $ 33.00 Zọpụta $ -33.00
Ogologo ogologo uwe eji aka na-emeghe CARDIGAN W / akpa
Long uwe Ribed Opened Nwepu ihe Cardigan W / akpa
Ogologo ogologo uwe W / ọnụọgụ nkọwa zuru ezu gburugburu n'olu Rib LE TOP
Long uwe W / strappy zuru ezu Now Neck Rib Nwepu ihe top
Ịgachi price $ 27.00 Zọpụta $ -27.00
Ogologo aka uwe V-olu isi ala swat CARDIGAN
Ogologo aka uwe V-olu Button Down Nwepu ihe Cardigan
Ịgachi price $ 37.48 Zọpụta $ -37.48
Womens Turtle Neck Sweaters na Stripes na-abịa na Grey, Red na White
Mma: Mgbe niile Loose Fit
Ihe: Ngwakọta ngwongwo
Ogo: S, M, L
Agba: Uhie, Grey, White
Size Jirinụ naa uwe Ogologo
* mmesho nwere ike ịdịtụ iche site na etu usoro
Ịgachi price $ 64.98 Zọpụta $ -64.98
Agụụ tlesọ Azụ Azụ.
Ultra Mbupu - psgbọ mmiri na 1 ruo ụbọchị 2 naanị!
Emere ihe acrylic ma di nma iyi.
Womens Agụ olu Olu USB idu Nwepu ihe
Odot: sigachi US (dabara adaba na ọkara)
Agba: Nwa, Gbanyụọ White, Pink
Nha: Otu Iha
Igbe: 51 "
Ogologo: 24 "
Aka uwe: 25 "
** Tụọ ịgha ụgha. Enwere ike inwe obere esemokwu nha.
Ịgachi price $ 112.50 Zọpụta $ -112.50
Sweater Aspen bụ akwa mkpuchi mara mma nwere olu olu na ogologo ogologo aka.
Ịgachi price $ 93.00 Zọpụta $ -93.00
Ihe kachasị mma na-acha uwe mwụda maka ịkụ bluụ oyi. Ọdịdị ya dị ntakịrị pụtara na ị nwere ike ịgbakwunye agba agba na agba gị, ma ọ bụ gaa maka anya ụda site na ijikọ ya na ụdị yiri ya. Naanị jikọta ịma mma a na uwe midi dị iche iche maka mmelite mara mma, ma ọ bụ kpọọ nkasi obi izu ụka site na ịwụnye ya na leggings.
Details: Zuru ike. Uwe ogologo. Turtleneck
Akwa & Nlekọta:
Ejiri na nha S
Nlereanya Nlereanya: elu 5'7 "/ 174cm - ukwu 23" / 58cm - bust 33 "C / 84C - hips 34" / 86cm - Gwa ya 34 ”/86.4cm
Size S: ogologo 22.8 "/ 58cm - bust 32" / 80cm - ubu obosara 13 "/ 33cm - ogologo aka uwe 23" / 59cm
Size M: ogologo 23.6 "/ 60cm - bust 34" / 85cm - ubu obosara 13.6 "/ 34.5cm - ogologo aka uwe 23.6" / 60cm
Size L: length 24.4 ”/ 62cm - bust 35” / 90cm - ubu obosara 14 "/ 36cm - ogologo aka uwe 24" / 61cm
Ịgachi price $ 60.00 Zọpụta $ -60.00
V Olu 3/4 uwe aka Slit HI-LO Nwepu ihe
V Olu 3/4 Aka uwe Side Slit Hi-lo Nwepu ihe
Ịgachi price $ 84.35 Zọpụta $ -84.35
Anyị ogologo uwe sweta atụmatụ, a na-agbatị ákwà na neckline. Loose dabara adaba na ikpa efe zuru ezu.
Self jikọtara ala
Dị uwe na-eyi obere obere
Elu: 5.7 "
Bust: 31 "n'úkwù: 26" Hips: 40 "
Ịgachi price $ 93.73 Zọpụta $ -93.73
Anyị ogologo uwe sweta atụmatụ, a ọkara-agbatị ákwà na mbe neckline. Loose dabara adaba na a n'ihu idu efe zuru ezu.
Ịgachi price $ 40.50 Zọpụta $ -40.50
Ogologo ogologo aka gburugburu olu akwa LE
50% acrylic 50% naịlọn
Ogologo Uwe Gburugburu n'Ubi Akpụ Nwepu ihe
Ịgachi price $ 89.30 Zọpụta $ -89.30
#Dị # NWC 123
Style: Ogologo Aka uwe Cardigan